छोरीको शव गा’ड्’न गएका पितामाथि भगवानको कृपा परेपछी भयो सोच्नै नसकिने चमत्कार !! [भिडियो हेर्नुस्] - Babal Khabar
November 7, 2020 November 7, 2020 by bikash
संसारमा अनौठा र विश्वास नै गर्न नसकिने घटना कहिले काही हुने गर्छन् । हालै यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ जुन कुरा विश्वास गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ । नेपालीमा एउटा भनाई छ । हरेक कुराको लागि समय आउनुपर्छ । समय भन्दा अगाडी केही पनि हुँदैन ।
भारतमा त्यस्तै एउटा उदाहरण देखिएको छ । भारतलको वरेलीमा भएको यो घटनाले वास्तवमै अनौठो कुरा पुष्टि गरेको छ । बरेलीमा एक जना पिता आफ्नो निधन भएको छोरीलाई अन्त्यष्टि गर्न गएका थिए । म शा न घाटमा गा ड् न पुगेका ति बुवालाई अर्को चमत्कार भयो । वास्तवमा बरेलीकी एउटी महिलाले समय भन्दा पहिले एउटा बच्चा जन्माइन्, जो यस संसारमा आउने बित्तिकै यो संसार छोडिन् ।शवगृहमा जनजात शिशुको शव गा ड् न उनीहरु पुगे । उनीहरु खा ड ल खनिरहेका थिए । त्यतीकैमा एक सुन्दर अर्को नवजात शिशु खा ड लमा फेला परिन् । उनी जिवित थिइन् । उनलाई बिछ्यौनामा राखिएको थियो राखिएको थियो । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
एउटा निधन भएको छोरीलाई अन्त्यष्टि गर्न गएका ति बुवाले अर्को जिवित छोरी फेला पारे । शवगृहमा जनजात शिशुको शव गा ड् न उनीहरु पुगे । उनीहरु खा ड ल खनिरहेका थिए । त्यतीकैमा एक सुन्दर अर्को नवजात शिशु खा ड लमा फेला परिन् । उनी जिवित थिइन् । उनलाई बिछ्यौनामा राखिएको थियो खा ड लमा बच्चा रोएको देखेपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीको रोहबरमा उनले ति शिशुलाई बाहिर निकालेका लिए । जुन स्थानमा जिवित शिशु फेला परिन त्यही स्थानम निधन भएकी शिशुलाई राखेर परिवार फर्किएको छ । जिवित शिशु फेला पारेपछि परिवारले परमेश्वरको देन सम्झे ।
जुन स्थानमा जिवित शिशु फेला परिन त्यही स्थानम निधन भएकी शिशुलाई राखेर परिवार फर्किएको छ । जिवित शिशु फेला पारेपछि परिवारले परमेश्वरको देन सम्झे । ति शिशुलाई अहिले अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । परिवारले तुरुन्तै यसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराए पछि बालिकालाई जिल्ला अस्पतालको बाल हेरचाह केन्द्रमा भर्ना गरिएको हो । शिशुको अवस्था भने गम्भिर छ । मानिसहरूले जमिन ख ने पछि फेला परेको हुनाले ति शिशुलाई सीताको नामले बोलाइएको छ । शिशुको अवस्था भने गम्भिर छ । मानिसहरूले जमिन ख ने पछि फेला परेको हुनाले ति शिशुलाई सीताको नामले बोलाइएको छ । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Prevयी राशिका महिलाहरु सह वासका लागि निकै छिटो तयार हुन्छन् !!
nextमृ’त्यु भएको एक महिनापछि घटनाले लियो नयाँ मोड, श्रीमानमाथि नै एस्तो गम्भिर आरोप !! (भिडियो हेर्नुस्)